निर्देशक नीता | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
By रजतपट अनलाइन
अभिनेत्री नीता ढुंगाना अब निर्देशक पनि बनिसकेकी छिन्। त्यसोत नीताले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम द हरिहर अधिकारी शो को निर्देशन गरिसकेकी छन् । हाल उक्त शो पोस्ट प्रोडक्सनमा छ । अब भने नीताले एक धार्मिक सिरिजको पनि निर्देशन गर्ने भएकी छिन् । ‘श्रीमदभगवत गीता’ नामक सिरिजलाई नीताले निर्देशन गर्ने भएकी छिन् । अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार सिल्पी थियटरमा एक कार्यक्रम गर्दै ‘श्रीमदभगवत गीता’को अफिसियल अनाउन्समेण्ट पनि गरिएको थियो । सोहि कार्यक्रममा सिरिजको गीतकार शितल गिरी, संगीतकार तथा गायक पुष्पन प्रधानसंग सम्झौता पनि गरिएको थियो ।
नीता ढुंगाना भन्न वित्तिकै झट्ट दिमागमा आउने कुरा भनेको ज्योतिष तथा अभिनेता हरिहर अधिकारी हो । हरिहर र नीताको प्रेम सम्ब्नधको चर्चा त छदै नै छ । उनीहरुले संगै काम पनि गरिरहेका छन् । हरिहर र नीताले संगै काम गरेको दोस्रो प्रोजेक्ट हो ‘श्रीमदभगवत गीता’ । यो सिरिज बनाउने आइडिया हरिहरकै हो अरे । तर, राजधानीमै रहेका हरिहर अधिकारी अनाउन्समेण्ट कार्यक्रममा भने पुगेनन् । हामीले नीतालाई किन हरिहर जी आउनु भएन भनेर सोधेका थियौँ । नीताको उत्तर यस्तो थियो ।
चाडै छायांकन आरम्भ गर्ने भनिएको सिरिज कुन प्ल्याटफ़र्ममा रिलिज गरिने भनेर चाहि फाइनल नभइसकेको नीताले बताइन ।
विश्वभारिमै बनेको धार्मिक सिरिज होस् या फिल्म कहिँ न कहिँ कतै न कतै कनट्रोभर्सिमा परेकै हुन्छ । सम्भवत नेपालमा बनेको पहिलो धार्मिक सिरिज हो ‘श्रीमदभगवत गीता’ । अब यो सिरिजलाई कनट्रोभर्सिबाट जोगाउन नीताको तयारि चै कस्तो छ त ?
नीता फिल्म्सको व्यानरमा निर्माण हुने सिरिज ‘श्रीमद्भगवद् गीता’मा महाभारतको कृष्ण र अर्जुनको पार्ट मात्र समावेश हुने बताइएको छ । गीतामा रहेका ७०० श्लोकबाट ‘श्रीमद्भगवद् गीता’ सिरिज ४५ भागको हुनेछ । ‘श्रीमद्भगवत गीता’मा रामजी लामिछानेको कोरीयोग्राफ, सञ्जय लामाको छायाँकन, वनिश शाहको सम्पादन रहनेछ ।
Next articleसबिन र अनुको रोमान्स
७ बैशाख २०७८, मंगलवार ०४:२७
सुजन श्रेष्ठ - ७ बैशाख २०७८, मंगलवार ०४:२७